संसद पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी कदम के होला ? « Janata Samachar
संसद पुन:स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी कदम के होला ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
योसँगै अब नेपालको राजनीति के होला भन्ने आम जनमानसमा चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन्छन् कि अब फेरि अर्को के निर्णय गर्ने हुन भन्ने उत्सुकता पनि उत्तिकै छ ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको खण्ड संसद् स्वभाविक प्रकियामा अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसलासँगै संसदीय प्रक्रिया सुचारु हुने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी ओली सरकारका पूर्व प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अदालतको फैसला स्वभाविक भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले संविधानले नभइ राजनीतिले संसदमा असर गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँले राजनीति आ–आफ्नै ताल सुरमा चलिरहने भएकोले अदालतको फैसलालाई स्वभाविक र नियमित रुपमा लिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ ।